MPANAKANTO MALAGASY BASTA LION : Niharan’ny lozam-piarakodia tao Nosy be hell ville
Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera “ facebook” omaly tontolo ny tranga nahazo ny mpanakanto Malagasy Basta Lion fa niharan’ny ny lozam-pifamoivoizana ny tenany. 28 octobre 2019
Nanamafy ary nanamarina izany tokoa ny anabavin’ity mpanakanto ity. Nanazava ity farany fa omaly alahady tokony ho tamin’ny efatra ora maraina, tao Androkaroka , Nosy be hell ville no niseho ny loza rehefa avy namonjy alim-pandihizana tao amin’ny “Mazava Club » izy ireo .
Raha ny fanazavana voaray hatrany dia niala lavaka ny fiara nitondra ireto farany saingy tsy voafehy ny familiana ka tafalatsaka tany anaty kirihitr’ala. Soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy fa saika naratra avokoa ireo mpandeha tao anatiny. Manaraka fitsaboana ao amin’ny “Clinique Italienne “ao Androkaroka moa ity mpanakanto ity hatreto noho ny ratra be nahazo azy ary tsy misy atahorana loatra kosa ny ainy rehefa nahazo fitsaboana ara-dalàna.